घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू फ्रेन्च फुटबल खेलाडीहरू Alassane Plea बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
Alassane Plea को हाम्रो जीवनी उनको बचपन कहानी को बारे मा तथ्यहरु चित्रण, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, प्रेमिका / पत्नी हुनु, जीवनशैली, कारहरु, व्यक्तिगत जीवन र नेट वर्थ।
Lifebogger आफ्नो जीवन यात्रा को एक संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण छ, आफ्नो जीवन शुरुआती दिन देखि, उहाँ प्रसिद्ध हुँदा। तपाइँलाई यस लेखनको आकर्षक प्रकृतिको स्वाद दिनको लागि, यहाँ उनको जीवनको प्रगतिको चित्रण सार हो। यो कुनै श doubt्का छैन, Alassane Plea को बायो को एक सारांश।
लास्कोको जीवन कहानी।
हो, तपाईं र मैले सायद उनलाई २०२०/२०१२ UEFA च्याम्पियन्स लिग सीजनको समूह चरणमा चिन्छौं। ठीक एक समयमा, ब्लासिया म्यानचेन्गलाडबचको शक्तार डोनेत्स्कको -6-० रूटमा अलास्ने प्ल्याले ह्याट्रिक गरे।.
एक साथ उसको ठूलो साझेदारी मार्कस थुरम ब्रेकिंग डिफेन्स र स्कोरिंग मार्फत, केवल केही प्रशंसकहरूले उनको लाइफ स्टोरी पढेका छन् जुन पर्याप्त आकर्षक छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
Alassane Plea बचपन कहानी:
जीवनी शुरुवातकर्ताहरूको लागि, उसले उपनाम लस्को हो। अलासेन अलेक्जान्ड्रे प्लाइको जन्म मार्च १ 10 1993 of को १० औं दिनमा आफ्नो बुबा, सेकुउ र फ्रान्सेली आमाको, उत्तरी फ्रान्सको लिली सहरमा भएको थियो। फूटबलर सम्भावित एउटै मात्र बच्चा हुन सक्छ जसको आमाबुबा बिचको भिन्नै परिवारबाट जन्मिएका छन्।
अलास्केन प्ल्याका अभिभावकलाई भेट्नुहोस्।
युवा लास्को लिलमा हुर्केका छिमेकीहरू हिंस्रक थिए। त्यसबेला, लागूपदार्थ र हिंसाको प्रयोग दिनको क्रम थियो। सत्य यो हो कि यो प्ल्याको फुटबलमा प्रारम्भिक चासो थियो जसले उसलाई उत्तरी फ्रान्सको अनैतिक संसारमा संलग्न हुनबाट टाढा राख्यो।
अलास्केन प्लीया जन्म र लिलीमा हुर्केका थिए।
Alassane Plea परिवार पृष्ठभूमि:
के हामीले यो उल्लेख गर्यौं कि लासोको छिमेकमा मुख्य रूपमा सामाजिक आवास परियोजना समावेश छ? यो स्पष्ट संकेत हो कि Plea को एक माध्यमिक श्रेणीको पालन पोषण राम्रो थियो वा उसका आमा बुबा खराब मा खराब वर्ग मा थिए।
Alassane Plea परिवार मूल:
हामी शर्त लगाउँदछौं कि यसले तपाईंलाई हैरान गर्दछ कि फर्वार्ड जैविक हो। जे हो त्येहि हो। उसको अँध्यारो र and्गीन आँखाको अभाव उसको आमा फ्रेन्च हो भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता गर्दैन। अर्कोतर्फ, अलासानेका बुबा माली भन्ने अफ्रीकी देशबाट आएका मालिअन हुन्।
Alassane Plea फुटबल कहानी:
अगाडिको फुटबलको केहि सम्झनाहरूमा हेर्नु समावेश छ Zinedine Zidane र रोनाल्डो लुइस नाजारियो डे लीमा UEIF यूरो २००० र २००२ फिफा वर्ल्ड कपमा उनीहरूको सामानहरू स्ट्रुट गर्नुहोस्।
चाखलाग्दो कुरा, यो २००२ मा थियो कि अमेरिकाको Ascq बाट स्काउट्स द्वारा Plea लाई हेरिएको थियो। तिनीहरूले केटामा आश्चर्यजनक सम्भावना देखे र उसलाई १० नम्बरको जर्सी दिए। यसरी क्यारियर फुटबलमा तत्कालीन--वर्ष पुरानो यात्रा सुरु भयो।
उहाँलाई भेट्न गाह्रो छैन। हो र?
भिलेनेभोइस क्लबमा फुटबलको आधारभूत कुरा सिकेपछि, सोकर प्रोडिजीले कडा प्रतिस्पर्धाको खोजी गर्न थाले। भाग्यवस, उनले २०० 2008 मा ES वास्केहलमा स्थान पाएका थिए। यो क्लबमा पोले २०० in मा ओलम्पिक लियोनाइसको ध्यान खिचेको थियो।
सुरुबाट, सबै बढ्दो प्रतिभाको लागि राम्रो थियो जसले मनपराउनेहरूसँग प्रशिक्षण दिएका थिए अलेक्जेन्डर लेकाजेट र शमूएल उमटी। उसको भविष्य निर्विवाद उज्जवल थियो। लियोनसँग पहिलो व्यावसायिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि, अलासेन प्ल्याका आमाबुवालाई थाहा थियो कि उनको समय आएको छ। वास्तवमा, संसार केवल उसको सीप बन्न लागेको थियो।
Alassane Plea जीवनी - फेम कहानी कहानी:
दोस्रो-स्तरीय एजे Auxerre मा छ महिनाको loanण जादू पछ्याई, उसले अधिक खेल समय खोज्न २०१ 2014 को गर्मीमा नाइसमा लियोन छोडे। द ईगल्ससँगको आफ्नो क्यारियरको बीचमा, प्ल्यालाई घुँडामा ठूलो चोट आईपर्यो।
शल्यक्रियाको माध्यम पछि, उसलाई मेनिसकसमा आँसु छ भनेर भनियो। विकास एक अवरोध थियो जसले उसलाई श doubt्का गर्न लगायो कि ऊ कहिल्यै फुटबलरको रूपमा सफल हुनेछ वा हुँदैन। दुःखको कुरा, उसले बुबालाई रोइरहेको भन्यो, तर उनका बुबाले सबै कुरा ठीक हुने कुरा आश्वासन दिनुभयो। खेल जारी राख्न डिस्चार्ज हुनु अघि अनुहार उसले बनाउनु भयो।
Alassane Plea Bio - सफलता कहानी:
भाग्यवस, लासो निको भयो र नाइसमा उनको पुरानो शक्ति फेला पर्‍यो। सँगै खेल्दै मारियो बाल्टोटेल, उनी २ wing पटक नेटको पछाडि फेला पारेर विंगम्यानभन्दा बढी प्रमाणित भए। २०१ 27 मा, लासो बोरसिया म्यानचेन्जलाडबचसँग पाँच वर्षको सम्झौतामा सामेल भए।
यो दुई वर्ष अघि २०१ 2018 मा कसरी सुरू भयो।
जबदेखि प्लेया क्लबमा सामेल भए, जबसम्म उनीहरूले आक्रमण गर्ने आउटपुटमा रचनात्मक धार थप्नको लागि उहाँ प्रशंसा प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। स्कोर गर्दै बोरसिया म्यानचेन्डलाबचको ach-० खाली शख्तार डोनेट्स्कमा थ्री-प्याक arguable 2020/2021 सीजन मा Plea को सबै भन्दा राम्रो भयो. यो प्रतियोगिताको इतिहासमा क्लबको सबैभन्दा ठूलो विजय थियो। बाँकी, तिनीहरूले भन्छन् तल उसको मुख्य आकर्षण सहित, इतिहास हो।
Alassane Plea प्रेमिका र पत्नी हुन को हुनुहुन्छ?
एक साथ रक्षा परेशान गर्ने पासहरूको एक मास्टर भएको रूपमा, राम्रो फुटबलर चीजहरू निजी राख्नमा राम्रो छ। तपाईं हामी उहाँ एक बुबा हुनुहुन्छ भनेर पुष्टि गर्न सक्नुहुनेछ, तर त्यहाँ उसको भाग्यमानी प्रेमिका वा श्रीमती को हो भन्ने छैन।
स्टार फुटबलर डेटि Who को हो?
आफ्नो जीवनमा महिला उनकी प्रेमिका हुन सक्छ किनभने विवाहित फुटबलरहरू उनीहरूका साझेदारहरू प्रदर्शन गर्न ठूला हुन्। यसबीच, हामीले अझै खेलाडीको बच्चाको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सकेनौं जुन अक्टोबर २०२० मा जन्मिएको थियो। यो पुरुष हो कि महिला? समय बताउनु पर्छ।
Alassane Plea परिवार जीवन:
जब कहिले फुटबल सीजन ब्रेक नजिक आउँछ, हाम्रो केटाको मुटु तापक्रमलाई निश्चित व्यक्तिहरूको साथ हुन मनपर्छ। तिनीहरू उसको परिवार हुन्। यहाँ हामी तपाईलाई अलास्ने प्ल्याका अभिभावकको बारेमा तथ्यहरू ल्याउँदछौं। साथै, हामी उसको भाइबहिनी र आफन्तहरूको बारेमा तथ्यहरू प्रदान गर्नेछौं।
अलास्केन प्ल्याको बुबाको बारेमा:
Sekou अगाडि बुबा को नाम हो। उनी मालीमा जन्मेका थिए तर उनी १ 17 वर्षको उमेरमा फ्रान्समा बसाई सरेका थिए। उनका छोराको जीवन र उदयको अभिन्न अंग रहेको सहयोगी बुवा खेलकुदकारहरूका लागि परिचित अनुहार हो। ऊ खेल र आफ्नो छोरालाई यस्तै प्रेम गर्दछ।
आश्चर्यजनक कुरा, Sekou एक अलास्ने Plea बाल्यकाल कहानी र जीवनी को टुक्रा लेख्न को समय को रूप मा एक विश्वविद्यालय व्याख्याता हो।
अलास्नेका बुबा सेकुउ।
अलास्ने प्ल्याको आमाको बारेमा:
अगाडिको आमा फ्रेन्च मूलको हो। उनी स्ट्राइकरका लागि सबै सेता र आमा छिन् जसले उनलाई परोपकारीताको मूल्य जगाउनको लागि श्रेय दिईन्।
उसको आमालाई धन्यवाद छ, कृपया अझै पनि परोपकारी कार्यहरूको प्रचार गर्न मन पराउँछन् यसप्रति उनको प्रतिबद्धताले उनलाई वास्तविक संसारमा फिर्ता ल्याउँदछ। उसले स्पष्ट रूपमा परोपकारको बारेमा कुरा गरिरहेको थियो र यसले कसरी खाँचोमा परेका व्यक्तिहरू छ भनेर उसलाई सचेत गराउँदछ। यो कार्य यस सुन्दर महिला - उनको आमाको बिना आउँदैन थियो।
अलास्ने Plea आफ्नो फ्रान्सेली आमा संग।
Alassane Plea भाई बहिनीहरू को बारे मा:
अगाडि सम्भवतः आफ्ना आमा बुबामा जन्मेको एकमात्र बच्चा हो। त्यहाँ कोही आफ्नो भाइ वा बहिनी को रूपमा पहिचान को रेकर्ड छैन। न त उनले भाईबहिनीहरू हुनेबारे केही भनेको छ। यो एक मात्र बच्चालाई कस्तो लाग्छ? Plea यसको बारेमा धेरै कुरा हुनुपर्दछ।
Alassane Plea का सम्बन्ध बारे:
उसको नजिकको पारिवारिक जीवनबाट सुरु गरौं। के तपाइँ सचेत हुनुहुन्छ कि उसको विस्तारित पारिवारिक जीवनको बारेमा जानकारी अवस्थित छैन? त्यहाँ खेलाडीको मातृ-आमा र हजुरबा हजुरआमाको कुनै नेतृत्व छैन। त्यस्तै उनका काका, काकी, काकी, काका, भान्जा र भतिजीहरू पनि उनीसँग अझै चिन्न सकेका छैनन्।
Alassane Plea व्यक्तिगत जीवन:
तपाईको मनपर्ने फुटबल स्टार बाहेक Sekou को छोरा को हो? हामी उहाँलाई बारेमा तपाईंको प्रेम कहिल्यै मर्ने छैन भनेर पक्का गर्न को लागी तथ्यहरु unravel रूपमा राख्नुहोस्। हामी आश्चर्यजनक सुपरस्टार व्यक्तित्वको बारेमा धेरै कुरा लेख्न सक्दछौं। यद्यपि हामी एक प्लेयरको रहस्य निकाल्ने प्रशंसकहरू होइनौं।
हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाई उहाँसँग भेट्नुहोस् वा उनको सुन्दरताको व्यक्तिगत अनुभूति पाउनको लागि उनका अन्तर्वार्ताहरू अवलोकन गर्नुहोस्, मुस्कुराउँदै प्लस उहाँको अगाडि मिलनसार र विवेकी चरित्र।
के हामीले उल्लेख गर्यौं कि पौडिन उसको शौक हो?
Plea फुटबल को खेल को बारे मा सबै छैन। उसलाई बास्केटबल, टेनिस, स्की मन पर्छ। उसका शौकहरूको सूचीमा थप गरिएको छ यात्रा, पौडी खेल्ने र परिवार र साथीहरूसँग गुणस्तरीय समय बिताउनु। एक खेलाडी कत्तिको पूर्ण हुन सक्छ?
कसरी Sekou छोरा बनाउँछ र आफ्नो पैसा खर्च, ऊ ज्यादै ठूलो पारिश्रमिक मा छ र तलब मा ऊ शीर्ष उड़ान फुटबॉल स्टार हुनुबाट प्राप्त हुन्छ। एक युवा र रमाईलो खेलाडी भएको कारण, उनीसँग net Eur मिलियन युरोको नेट सम्पत्तीको आनन्द लिने र सुधार गर्न प्रायः दशक भन्दा बढीको प्रायोजन र समर्थन छ।
के तपाइँ सचेत हुनुहुन्छ कि स्ट्राइकरसँग एउटा राम्रो कार छ जुन उसले आँधीबेहरी प्रशिक्षणको लागि प्रयोग गर्दछ? हामी शर्त लगाउँछौं उहाँ पनि सुन्दर घरमा बस्नुहुन्छ। Weekly 60,000 साप्ताहिक ज्यालाको खरीद शक्तिलाई कहिल्यै हल्का नबनाउनुहोस्!
के लास्को कारको माथि बसिरहेको व्यक्ति हो?
Alassane Plea को बारे मा तथ्यहरु:
हामीसँग धेरै भन्दा राम्रो चीज छैन। लास्सोको बाल्यकाल कहानी र जीवनी मा यो लेख लपेट्न, यहाँ Gladbach स्टार लड़का को बारे मा3चीजहरू छन्। तिनीहरू तकनीकी रूपमा कम ज्ञात छन् वा उहाँको बारेमा अनटल्ड तथ्यहरू।
प्रति वर्ष: € 3,124,800।
प्रति महिना: € 260,400।
प्रति हप्ता: € 60,000।
प्रति दिन: € 8,571।
प्रति घण्टा: € 357।
प्रति मिनेट: € 5.95।
प्रति सेकेन्ड: € 0.09।
औसत फ्रान्सेली नागरिकले (मासिक € 4,130 बनाउँदै) years २5०,260,400०० कमाउन make बर्ष र दुई महिना काम गर्नुपर्नेछ - जुन उसले प्रत्येक महिना प्राप्त गर्दछ।
तपाईंले Alassane Plea हेर्न सुरु गर्नुभयोबायो, यो उसले कमाएको हो।
यदि तपाईंलाई थाहा थिएन भने, त्यो नाम अलास्सेन अरबी मूल हो र यसको अर्थ "ह्यान्डसम" छ। तपाईं, यो सजिलै मन परेको कसैलाई विश्वास गर्न हौसेम अउर एक मुस्लिम हो तर नाम - Alassane Plea - धेरै इस्लामी ध्वनि छैन। फुटबलरले सार्वजनिक रूपमा देखायो कि उनी आफ्नो धर्ममा गर्व गर्छन्।
हाम्रो छोरालाई As-salamu alaykum।
यो दृढतापूर्वक सुझाव दिन्छ कि एक मुस्लिम छ जो उसका बुवा फुटबल प्रतिभा छोरा मा उनको विश्वास मा पारित छ।
तथ्य # १ - खराब खेल रेटिंग:
जस्तै जीन-फिलिप मतेटा - उनको साथी बुंडेस्लिगा स्ट्राइकफोर्स, Plea निष्पक्ष समग्र र सम्भावित FIFA रेटिंगबाट ग्रस्त छ। फ्यानहरू विश्वास गर्छन् कि दुबै खेलाडीहरू जर्मन लिगमा उनीहरूका जबरदस्त प्रभावहरूलाई विचार गर्दै अपग्रेडको योग्य छन्।
यथार्थमा हामीले हेर्‍यौं सब भन्दा राम्रो रेटिंग्स मध्ये एक।
Alassane Plea को बचपनको कहानी र जीवनी मा यो जानकारी को टुक्रा पढ्न को लागी धन्यवाद। हामी आशा गर्दछौं कि यसले तपाईलाई विश्वास गर्न हौसला प्रदान गर्दछ कि अवरोधहरू सफलताका कथाहरू हुन्। Plea आफ्नो सफलता भन्दा पहिले एक घुँडा चोट को लागी पीडित जस्तै।
स्ट्राइकरका बाबुआमाले उनीहरूको वचन र कार्यहरूमा उनको क्यारियरमा समर्थन गरेकोमा उनीहरूको सराहना गर्न अब यो behooves। प्रसिद्ध जस्तो एन'कोलो कन्टे, Plea मालीयन मूलका ती मध्ये एक हो जसले अझै पनि पश्चिम अफ्रिकी देश मा आफ्नो नातेदारबाट धेरै प्रेम पाउँदछ।
Lifebogger मा, हामी वितरणमा गर्व गर्छौं फ्रेन्च फुटबल खेलाडीहरू सटीकता र निष्पक्षताका साथ बाल्यकालका कथाहरू र जीवनी तथ्यहरू।
यदि तपाईं केहि पनि देख्नुहुन्छ जुन ठीक लाग्दैन भने, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। अन्यथा, हाम्रो विकी तालिकामा प्ल्याको बायोग्राफी सारांशको द्रुत भ्रमण पछि एक टिप्पणी दिनुहोस्।
पूर्ण नामहरू: अलासेन अलेक्जान्ड्रे प्ल्या।
सेमी मा उचाई: १181 C सेमी
अभिभावक: Sekou (बुबा)
रुचि: बास्केटबल खेल्दै, टेनिस, स्कीइ,, यात्रा र परिवार र साथीहरूको साथ गुणवत्ता समय खर्च।
नेट मूल्य: .6.5..XNUMX मिलियन यूरो।
बोरुसिया मोन्चेन्ग्लाडबच फुटबल डायरी
परिमार्जित मिति: डिसेम्बर २,, २०१ 7